Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi Oo Ku Biiray Shirka Musharaxiinta - Horseed Media • Somali News
November 23, 2020Somali News
Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi Oo Ku Biiray Shirka Musharaxiinta
Shirka musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo maalintii seddexaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxa ku biiray qaar kamid ah siyaasiyiinta gobolada Waqooyi sida guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi, wasiir hore xil. Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) iyo xil. Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo labaduba ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo guddoomiyihii hore ee maxkamada sare Ibraahim Iidle Sulayman.
Mas’uuliyiintan ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa la filayaa inay warbixin siiyaan Musharaxiinta Madaxweynaha, si ay uga hadlaan muranka ka taagan guddiyada doorashada iyo qaabka aysan ugu qanacsaneyn sida ay Xukuumadda wax u wado.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa si weyn uga soo horjeestay Guddiyada Doorashada heer federaal iyo kuwa maamulaya doorashada Xildhibaanada kasoo jeeda Somaliland oo dowladda ay magacawday.